Madaxweynahad dawlada fadaraalka Farmaajo iyo Madaxwaynaha dawlada aan la aqoon san ee Jamhuuriyada Somaliland Muse biixi. – idalenews.com
Madaxweynahad dawlada fadaraalka Farmaajo iyo Madaxwaynaha dawlada aan la aqoon san ee Jamhuuriyada Somaliland Muse biixi.
Dalka soomaaliya waa dal aad u balaaran kana madi ah dalalka aduunka uugu wayn dhul ahaan,dadkiisana waxaa lagu qiyaasaa maanta 40-50 malyuun dad ahaan.waa dad isku diin ah,waa dad isku midab ah,waa dad isku dhaqan ah,waa dad isku af ah,waa dad wada dhashay oo is leh kuligood.Waayadii gumaystaha saan cadaalaha ahi yimid Qaarada afrika,si uu u xado hantida eebe ku manaystay qaarada afrika,ayuu dalkeena u kala qaybiyay 5 qaybood.
Maxay ahayd ujeedada dalkeena loo kala qaybiyay? hadaynaan inbadan famhin sababtaa macnaheedu waxaa weeye wax badan baynaan garan.Ugu horayn gumaystahaa dhexdiisa kukala bad badbaadayay,oo nin waliba waa in uu helaa cadkiisa kol hadii godobta lawada galayo oo wax lawada xadayo.waxaa labaysa in la dhaxal siiyo dalka lakala qaybiyay in aysan mustaqbalka isfahmin oo midoobin ee ay iyagu isku mashquulaan isna fahmi waayaan si aysan guumaystaha uugu iman godobtuu galay. Maxaa yeelay waa bad baado gumaysi inta ay isku mashquul san yihiin kuwii laguumaysan jiray.waanaha haynaa maanta.
Waxaa kaloo kala qaybinteena iyo in layna kala ilaaliyo qayb ka ah,arimo diineed iyo kuwo dhaqaale oo ah dawlad islaam ah oo soomaaliyeed oo qani ah in ay aayaha keenayso cabsi kuwajahan gumaystaha iyo xulufadiisa qaarada afrika uu ku leeyahay. Taa badalkeeda waxay door bideen in inta yar ee kiristiyaanka ah ama gaalada ee ku nool Eithiopia lagu ilaaliyo halkaa in ay xukumaan awood kale oo khatar ku ahina imaan kana dhalan aga gaarkooda iyo geeska afrikaba.
Dalkeenu waxa uu dhacaa xudunta islaamka iyo xudunta isku xirka qaaradaha aduunka,waana marin aduunku isaga kala goosho, aqoonteedii iyo ilabaxnimadeedii ayaynaan lahayne xaq baynu ileenahay in aynu lacag ka qaadno marinka isku xira aduunka ee ku yaal dalkeena intaasaana inagu filayd inagana badnayd dakhli ahaan dalkeena oo dhan.
Dad abuuran hadana aan dagaankooda iyo noloshooda aan maaraynkarin ayaynu noqonay soomaaliyeey. Dalkeena iyo jiraataankeena cadawga aan doonayn magaranayno! waa kuma cadawga soomaaliyeed qofkaad tiraahdaa markiiba wuxuu ku leeyahay waxaan is haynaa reer qurac!! macnuhu qofkani waa abuuran yahay waana dhaqdhaqaaqayaa oo nafi waa ku jirtaa laakiin wax ma dhaamo xoolaha cawska cunaya ee warmooga ah.
Soomaaliya hada maha uun waligeedba dawladaa jira raba in lawaayo dad soomaaliyeed oo ah dawlad xoogleh oo dhisan oo katalinaysa dhulkooda hodanka ah.karaamada iyo jirtaanka qofka soomaaliyeed dawlado ayaa diidan mar hore iyo hadaba.hadaynaan ogayn sidee u noolaan karaa oo u sii jiri karaa. fikirkii gumaystaha inagu kala qaybiyay inagoo uusan ina waydiin war soomaaliyeey ma idinkala qaybiyaa? uu dadkeenii midka ahaa ka dhagay 5 qaybood oo 3 sadex kamid ah siiyay shisheeye wali gacan ku haysta sida jabuuti oo wali haysto faransiis,nfd oo wali ay haysta kenya iyo soomaali galbeed oo wali ay haysato Eithiopia. inaynu inagu ku taageero kala qaybintaa oo warkiisii xaysiino oo sii hir galino waa nacasnimo iyo raganimo xumo halkii u danbaysay.
Waxaa hada mar walba lasii xumaynayaa oo dad cadaw ah laysaga dhigayaa labadii kabad baaday in gumaysi sii haysto.kuwaasoo iska diiday kala qaybintii gumaysi iyagoo ah haldal iyo haldad lagu sameeyay.cadawgii soomaaliyeed ayaa hamuun u qaba in uu hubsado in labadana uu midba meel cidla ah taago oo aysan waxba noqon waligood. waa nasiib daro in dadkeenu arinku intuu qodan yahay iska garan waayeen. Halistuna waxay tahay dad inaga ah oo soomaali ah ayaa gumaystuhu ku lacag siiyaa fulinta iyo faa finta iyo kala gaynta umada soomaaliyeed ee walaalaha ah ee loo kala qaybinayo had iyo jeer si xaaran ah oo xaqdaro ah iyo dulmi.
Dadka yar ee inagu dhex jira ee ina kala qaybinaya ee cadawga ah yaysan inagu sirin tolnimo iyo inaadeernimo been ah maadaama iyaga laga xaday maskaxdii oo ay u guuxeen warkii cadawgeeni ku shirqoolay. qaar waxa uu u sheegay saldano in ay helayaan,qaar lacag buu siiyaa,kuligoodna maskaxduu kadagay oo u fariistay,ibtilo kawayna majirto gumaysi maskaxda kuu dhex fariistay.
Maanta waxaa jirta arimo yididiilo wayn leh oo la xariirta wada hadalada labadii 1991 dii ay ka burburtay dawladoodii dhexe ee ay kumidaysnaayeen. wada hadaladan way ka duwan yihiin kuwii hore kana miisaan culus yihiin,marka loo eego labada madaxwayne ee kala hogaaminaya labada dhinac.waxaan qabaa madaxwayne muuse biixi in uu yahay nin waayo arag ah,garankarana dhibka haysta guud ahan soomaaliya ama ha ahaado somaliland ama ha ahaado soomaaliya. Waxaa kaloo muuse biixi yahay nin jecel wanaaga iyo soomaalinimada kuna wayntahay in dalkaani helo cadaalad iyo wanaag dawladnimo buuxda.
Dhanka kele madaxwayne Farmaajo waa nin qofkastoo soomaaliyeed oo daacad ahi uu arkayo in uu yahay shaqsi aan aqoon qaybyaalad kuna dhaqmin dadka soomaaliyeedna u siman yihiin.Madaxwayne Farmaajo waa nin xilkas ah kana go an tahay in uu dadkiisa soomaaliyeed mideeyo meel isugu keeno si walal tinimo ah,loona dhiso hada wax rasmi ah oo anfaca umada soomaaliyeed aayaheeda hada iyo ha dhawba.waa nin jecel dadka soomaaliyeed,noloshooda iyo dawladnimadooda iyo hormarkooda.
Hadaba hadii rag noocaan ahi maanta ina hogaaminayaan rajo fiican ayaan qabnaa iyo guul wayn. waxkastoo lakala tabanayo waa in lagu xaliyaa isu garaabid iyo isu tanaasul buuxa,wanaa in loo wada hadlaa si dhab ah oo kama danbays ah.waxaana waajib ah in danta gudaha ah ee soomaaliya dhexdeeda ah aan shisheeye loogu yeeran dan leey ah. shishee dan inooma wado waana arimo gudaha soomaaliyeed khuseeya,inagaa iska leh in aan ka heshiino arimaha ina dhexyaala ee kusaabsan gurigeena.
Eithiopia arimaha dhexdeeda ah ulama tagto dalal shisheeye waayo waxay ogyihiin in ay uuga siidarayaan arintana laga dhigayo mid marwalba dibad looga baahan yahay xalkeeda. Hadaba ninkii layimaad shisheeyaa ina xalinaya waa nin kuwaan sheegaayay ah oo cadaw u shaqaynaya. dalbaynu leenahay,dhaqan baynu leenahay, dadbaynu nahay aan xalisano arimaha dhexdeena ah inagoo ah soomaali kaliya oo cidkale inagu dhex jirin waxaan hubaa in aynu heshiinayno oo isu tanaasulayno oo walaalo ahaanayno.
Arimaha ah in markooda loo tago walaalaha somaaliland waa soo dhawaynaynaa,caasimada ay ku dhageena waa u sii daynaynaa oo haynoo diyaarsheen deegaan ku haboon caasimada cusub ee soomaaliya yeelanayso hadii laysku raaco,waxaana aad u haboon istaraatiijiyo ahaan gobolka sanaag meel kamid ah,khasabna maha in meeshu dhisan tahay waayo waa la dhisayaa. waxaan sidaa u leeyahay gobolka sanaag waa gobol leh taariikh waana dhul cimilo wanaagsan,umana dhawa dhanka eithiopia,waa ku haboon yahay dhan walba in caasiamda lageeyo halkaa. laakiin waxaa iskaleh arinka intiisa badan somaliland halka laga dhigayo anagu soo jeedin waa leenahay.
Waxaa hubaal ah in soomaaliya u baryayo waa cusub oo ay galayaan nolol iy nabad iyo barwaaqo iyo isku duubni aan abid hore loo arag, waxaynuna noqonaynaa dal leh awood iyo magac nin walbaana u soo shaqo doonto. hadaba kulankan waxaa laga filanayaa isbadal cusub oo u horseeda soomaali dawladnimo hana qaada oo waarta.waxaana rajaynaynaa guul.
Wasiirka Cadaalada iyo Taliyaha Ciidanka Asluubta oo ka digay dhismaha dhulka danta Guud
M/Cadaaladda Adduunka War kasoo saartay Kiiskii Badda ee Somalia iyo Kenya